အလုံမြို့နယ်တွင် လူအုပ်စုဖြင့် အနုကြမ်း ဝင်စီး၊ ဓားစာခံတစ်ဦး ခေါ်ဆောင်သွား၊ အနုကြမ်းစီးသူ - Yangon Media Group
အလုံမြို့နယ်တွင် လူအုပ်စုဖြင့် အနုကြမ်း ဝင်စီး၊ ဓားစာခံတစ်ဦး ခေါ်ဆောင်သွား၊ အနုကြမ်းစီးသူ
ရန်ကုန်၊ နုိုဝင်ဘာ ၁၂
ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး အလုံမြို့နယ် စောရန်ပိုင် ၈ ရပ်ကွက် ဗဟိုအမျိုးသမီး ဆေးရုံရှေ့ မျက်နှာချင်းဆိုင် ဗဟုိုလမ်း ခြံအမှတ် ၅၁ (ခ) တွင် နိုဝင် ဘာ ၁၂ ရက် ည ၇ နာရီခန့်က လူအုပ်စုနှင့် အနုကြမ်းဝင်စီးမှုတစ် ရပ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ဓားစာခံတစ်ဦးကို ခေါ်ဆောင်သွားကြောင်း သိရသည်။
”ဖြစ်စဉ်ကတော့ ည ၇ နာရီ ခွဲလောက်မှာ အဲဒီခြံထဲကနေ ကားနှစ်စီး ထွက်လာတယ်။ လင့်ခရူဆာ လိုကားမျိုးနဲ့ လိုက်ထရပ်တစ်စီး အမြန်မောင်းထွက်သွားတယ်။ အဲ ဒီနောက်မှ ခြံထဲက အလုပ်သမား တွေ ထွက်လာပြီး အနုကြမ်းစီးတယ် ဆိုတာ သိရတာ။ ဓားစာခံတစ်ဦး ပါသွားတယ်ပြောတယ်။ သူဌေးကို ဖမ်းသွားတယ်လည်း အလုပ်သမား တွေက ပြောတယ်။ အဲဒါ အလုပ် သမားတွေက ပြေးထွက်လာပြီး ရဲခေါ်တော့မှ အိမ်ထဲမှာ တရားခံ နှစ်ဦး ကျန်ခဲ့နေတာ ထပ်မိတယ်”ဟု ခြံအမှတ် ၅၁(ခ) ဘေးတွင် ဈေး ဆိုင်ဖွင့်လှစ်ထားသည့် အလုံဒေသခံ တစ်ဦးက ပြောသည်။
ခြံအမှတ် ၅၁(ခ)တွင် နေထိုင် သူမိသားစုသည် ပဲလုပ်ငန်း၊ အင် ဂျင်ဝိုင်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချတဲ့လုပ်ငန်း အပါအဝင် စီးပွားရေးများစွာလုပ် ကိုင်နေသူများလည်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ရပ်ကွက်ဒေသခံများ၏အဆို အရ ဖမ်းမိထားသူ နှစ်ဦးသည် အငှားလိုက်သည့်လူမိုက်များပုံစံ ဖြစ်နေကြောင်း သိရသည်။ ”လူအုပ်စုဆိုတော့ ၁ဝ ဦး လောက်ရှိမယ်ပြောတယ်။ အထဲ မှာ ဘယ်အချိန်ကတည်းကဝင်ပြီး ဖြစ်နေတာလည်း ကျွန်တော်တို့ မသိဘူး။ အလုပ်သမားတွေကို ဖမ်းပြီး ရိုက်တယ်။ ကြိုးတွေနဲ့တုပ် ရိုက်တယ် ပြောတယ်။ အခုက ရဲ စခန်းမှာမိထားတဲ့ တရားခံနှစ်ဦး ကို ခေါ်သွားတယ်”ဟု ဒေသခံ တစ်ဦးက ပြောသည်။
လတ်တလော ဖမ်းဆီးခေါ် ဆောင်သွားသည့် ဓားစာခံလိုက်ပါ သွားသောကားကို မိပြီဟူသည့် ရဲတပ်ဖွဲ့ စကားပြောစက်မှ အသံ များ ကြားရပြီးနောက် ည ၇ နာရီ ၄၃ မိနစ်လောက်တွင် လုံခြုံရေး ယူထားသည့် ရဲကားများအားလုံး ခြံအမှတ် ၅၁(ခ) ရှေ့မှ ထွက်ခွာ သွားကြောင်း သိရသည်။ ခြံအမှတ် ၅၁(ခ)မှ အလုပ် သမားများနှင့် အိမ်ပိုင်ရှင်များက လည်း အလုံရဲစခန်းသို့ လိုက်သွား မည်ဟူ၍ ထွက်ခွာသွားကြောင်း သိရသည်။
ဒီမိုကရေစီ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ထောင်နိုင်ရန် အဓိကစိန်ခေါ်မှုမှာ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး??
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွား ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ဖွင့်လှစ်ရန် ပြည်ထောင်?
ရိဒ် ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ ကွမ်းသီးရောင်းဝယ်ရာတွင် ကုန်တင်ဆောင်မှု အကန့်အသတ်ကြောင့် ကွမ်းသီ??
မင်းသမီး စကားလက်ဂျိုဟန်ဆန်၏ ‘Black Widow’ ရုပ်ရှင်ကို အသက်ကန့်သတ်ချက်ဖြင့် ကြည့်ရမည်
ဝင်ငွေခွန်များကြီးကြီးမားမားလျှော့ချမည့်ထရန့်၏ ဥပဒေမူကြမ်း အထက်လွှတ်တော်တွင် ရှေ့မတိုးန??
သရေခေတ္တရာ ပျူမြို့ဟောင်း အတွင်းရှိ နန်းမြို့ရိုး ပေ ၃ဝ ခန့် ပြိုကျ ဌာနမှ ပြန်လည်ပြုပြင် မွမ်းမံသွားမည်